Madaxda Manchester United Oo U Sheegay Wakiilada Ole Gunnar Solskjaer Go'ankooda Ku Aadan Macalinka
HomeWararka CiyaarahaMadaxda Manchester United oo u sheegay wakiilada Ole Gunnar Solskjaer go’ankooda Ku aadan Macalinka
Madaxda Manchester United ayaa u sheegay wakiilada in shaqada Ole Gunnar Solskjaer ay tahay mid badbaado leh oo Muran ku jirin.
Red Devils ayaa hal dhibic ka heshay seddexdii kulan ee ugu dambeysay Premier League oo ay 2-0 ku garaacday Atalanta BC tartanka Champions League.
Natiijo ahaan, mustaqbalka Solskjaer ayaa mar kale su’aal la gelinayaa, iyadoo tababaraha ku guuleystay Premier League iyo Serie A ee Antonio Conte la sheegay inuu xiiseynayo inuu qabto Old Trafford.
Si kastaba ha ahaatee, The Sun ayaa sheeganeysa in United ay ku Kalsoontahay Shaqada Solskjaer, iyadoo shaqadiisa ay tahay mid sugan waqtigan.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in ciyaartoy badan oo United ah ay su’aal ka keenayaan in Solskjaer uu kooxda u qaadayo jihada saxda ah, in kasta oo, iyadoo Bruno Fernandes la filayo inuu tababaraha ka dalbado inuu beddelo taatikada waqtigii nasashada ee Atalanta.
Solskjaer Red Devils ayaa isku dayi doona inay soo afjaraan goolashii ugu xumaa ee laga dhaliyey in ka badan 50 sano marka ay Liverpool ku soo dhoweynayaan Old Trafford kulanka maanta ee Premier League.